RW Khayrre oo ku dhaqaaqay arrintii uu u tegey dalka Qadar + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka RW Khayrre oo ku dhaqaaqay arrintii uu u tegey dalka Qadar +...
(Dooxa) 14 Dis 2019 – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa ka qayb galay furitaanka madasha Dooxa.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ay u tahay markii sedaxaad ee uu ka qayb galo ayaa maalinta berri ah khudbad ka jeedinaya madasha Dooxa oo sannadkaan looga hadlayo ajandayaal muhiim ah. Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayrre ayaa Madasha Dooxa ka qayb galay sanadihii 2018 iyo 2017-kii.
Warar hoose ayaa sheegaya in Mudane Xasan Cali Khayrre uu booqashadiisa Dooxa uu uga faa’iidaysan doono in uu la kulmo madaxda dalkaasi, si looga wada hadlo arrimo dhowr ah oo ka dhexeeya labada dal, iyadoo ay Qadar Somalia ka waddo mashaariic kala duwan oo horumarin iyo aadminnimo iskugu jira.
Warar kale ayaa tibaaxaya in uu Khayrre halkaa u tegey arrimo ku aaddan doorashada soo socota ee madaxtinnimada oo laga yaabo inuu ka mid noqdo musharrixiinta ku hardamaysa.
Previous articleDF oo ballaarinaysa Garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cadde
Next articleWAR CUSUB: Turkiga oo Ruushka la gelaya heshiis uu kusoo saarayo gantaalaha S-400 & hub kale + Sawirro
(Washington, DC) 18 Sebt 2020 - Wasiirka Gaashaandhigga Maraykanka, Mark Esper, ayaa ku dhawaaqay qorshe ay ku ballaarinayaan Ciidamada Badda iyadoo loo samaynayo maraakiib,...